Siyavuyisana nale ntsebenziswano. Emva kothethathethwano olude kunye nohlolo, iShanghai Xieyanshi Abrasives ekugqibeleni yadlulisa i-COMAC'S (Commerce Aircraft Corporation yase China Ltd) kuvavanya ngokungqongqo kwaye ingqinisisa, iba yeyabo ...
Iindlela zokugaya zibandakanya ukugaya okomileyo, ukugaya amanzi, ukugaya ioyile, ukugaya i-wax kunye nokucoca amazinyo. Ukugaya okomileyo kunokwahlulwa kube kukugaya okungagungqiyo, ukugaya tyaba kunye nokugaya kakuhle. Ukugaya okungafunekiyo kusetyenziselwa ukususa uboya beenkuni, amanxeba, amanqaku e-glue kunye nep ...
Amanyathelo okufaka isixhobo esifanelekileyo seShelf yeXys Uthuli simahla seSelfowuni esomileyo
Inyathelo 1 Iinkcukacha zamacandelo e-Spare: (Umahluko kancinci kukhetho lwamalungu ahlukeneyo) Inyathelo 2 ...
Abrasive Abrasives ligama eliqhelekileyo leerrasives kunye neerrasives, kubandakanya iimveliso ezirhabaxa kunye neemveliso zeBai Abrasives. Abrasive Abrasives zaziwa njengamazinyo emizi-mveliso. Ekuguqulweni, esirhabaxa okanye esirhabaxa izixhobo ziqhele ukusetyenziswa njengezixhobo zokusila kwiindawo zomatshini ukuhlangabezana neemfuno ezithile zobugcisa ...